Global Voices teny Malagasy · 14 Janoary 2009
14 Janoary 2009
Tantara tamin'ny 14 Janoary 2009
R.D. Kongo14 Janoary 2009
Taorian'ny fahavakisana fonja misesisesy nanerana an'i Madagasikara tamin'ny herinandro, dia notaterin'i Jentilisa fa may ny fonja hafa any Toamasina ( morontsiraka atsinanan'i Madagasikara) omaly ( 13 Janoary) [mg]. Nitatitra ny fisian'ny setroka mitakovona sy ny feom-basy 5 ny nanatrimaso. Mbola hofantarina moa ny anton'ny setroka sy ny feom-basy. Lova Rakotomalala
Espaina: Mpiara-miasa amin'ny GV Lingua voafantina
Espaina14 Janoary 2009
Maro amin'ireo vohikala Global Voices Lingua na Global Voices voadika amin'ny teny hafa no miara-miasa amin'ny vohikalana mpampita vaovao hafa hifanakalo RSS amin'ny lohateny mba hahazoany mpamaky bebe kokoa amin'ny fiteny samihafa. Vao haingana teo koa dia nanangana izay fiaraha-miasa izay ny Global Voices amin'ny teny Espaniola sy ny Periodismo...